Daawo Sawiro…Xisbiga Waddani oo laan cusub ka furtay Galbeedka London gaar ahaan xaafadda Hays. | Duul News International
Daawo Sawiro…Xisbiga Waddani oo laan cusub ka furtay Galbeedka London gaar ahaan xaafadda Hays.	London07Feb15(Duulnews) Kulan ay isugu yimadeen qaar ka mid ah tageerayaasha Xisbiga Waddani ee UK, gaar ahaan xaafadda Hays ayaa ka dhacay isla xaafada Hays,kulanka oo ujeedadiisu ahayd daah-furka xafiis cusub oo Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani ku yeelan doono galbeedka magaaladda London gaar ahaan Xaafadda Hays oo ka mid ah meelaha ay shacabka reer Somaliland aad ugu badan yihiin,Kulanka oo ay goob-joog ka ahaayeen qaar ka mid ah madaxda xisbiga ee UK iyo Yuruba.
Kulanka Daaf-furka xafiiska ayaa waxa kasoo qayb galay tageerayaasha iyo qaar ka mid ah shacabka reer Somaliland ee degan xaafadda Hays iyo agagaarkeeda. Waxa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda xisbiga,Gudoomiyaha laanta Hays iyo madax kale oo farabadan.
Lasoco Muqaal dhawaan ku saabsan sida guud ahaan uu u dhacay kulanka daah-furka xafiiska Wadddani ee Hays London.
xafiiska wararka ee duulnews/London duulnews